Pep guardiola oo sheegay in kooxdiisa aysan ugu cad cadeen ku guuleysiga champions league waase tee kooxda ku guuleysan karta.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Pep guardiola oo sheegay in kooxdiisa aysan ugu cad cadeen ku guuleysiga...
Tababaraha kooxda Manchester City ayaa sheegay inuusan u arkin kooxdiisa inay yihiin kuwa safka hore kaga jira tartamada Yurub Pep Guardiola ayaa sheegay inuu rumeysan yahay in kooxda Bayern Munich ay ugu cadcad tahay inay ku guuleysato Champions League.
Iyada oo Arbacadii ay 2-0 kaga badiyeen kooxda Borussia Monchengladbach, City ayaa haatan ku guuleysatay 19 kulan oo isku xigta tartamada oo dhan Si kastaba ha noqotee, Guardiola ma aaminsana in guushii uu ka gaaray kooxdiisa ay ka dhigeyso kuwa ugu cadcad marka loo eego taariikhdooda Champions League.
Guud ahaan, waxaan xakameynay ciyaarta. Nasiib darrose maanta ma aanan ahayn mid caafimaad ahaan ku filan xagga hore, ”ayuu u sheegay BT Sport. Taasi waa wax aan ku horumarin karno tartankan marka hore, waa inaan noqonaa kuwa caafimaad badan Tartankan, waa inaad noqotaa mid kaamil ah si aad u hubiso inaad soo martay.
“Markaan arko Bayern Munich uma maleynayo inaan ugu cadcad nahay. Bartilmaameedkeygu waa kulanka West Ham seddex maalmood gudahood aan la ciyaareyno.
“Haddii dadku yiraahdaan waxaan nahay kuwa ugu cadcad, waa inaan aqbalnaa, laakiin koox, taariikhdooda oo dhan, ayaa hal jeer u soo baxday semi-finalka? Waa hagaag, waxay dhahaan, waa inaan aqbalnaa.
Iyada oo kooxdiisu haatan tahay kooxda ugu sareysa Premier League iyo hal talaabo oo u dhow wareega quarter-finalka Champions League, Guardiola wuxuu si dhaqso leh ugu amaanayaa daafaca Manchester City dadaalkoodii bilihii ugu dambeeyay.
City ayaa haatan haysata 13 kulan oo nadiif ah 19-kii kulan ee ay ciyaareen, iyadoo Guardiola uu sheegay in khadkiisa dambe uu ahaa mid ka danbeeya guusha kooxda “Taasi waa sababta aan si cajiib ah ugu adag nahay 19 kulan oo isku xigta,” ayuu ku yiri shirkiisa jaraa’id.
Qof walba wuu ku lug leeyahay. Difaacayaasha ayaa laga dhaliyay hal bartilmaameed Waa inaad tan barataa, dhammaantiin, maxaa yeelay waxaan dadaal badan la galnaa Raz, Phil, Gabriel, Gundo iyo Bernardo, qof walba.
Wuxuu intaas raaciyay: “Kubada cagta ma ahan weerar iyo difaac; waa wada jir.
Previous articleFalanqaynta Kulanka Manchester United Vs Real Sociedad ee Koobka Europe League
Next articleHernan Crespo oo shaaca ka qaaday cidda ku booriyay Lautaro Martinez inuu diido dalabkii Barcelona.